ဟွန်ဒါအန်းဒရွိုက်ကား DVD, ဟွန်ဒါအန်းဒရွိုက် 4.2 ကား DVD, ဟွန်ဒါအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD တရုတ်ဦးဆောင်စက်ရုံ
ဖေါ်ပြချက်:ဟွန်ဒါအန်းဒရွိုက်ကား DVD,ဟွန်ဒါမှာ Android 6.0 ကား DVD,ဟွန်ဒါမှာ Android 5.1 ကား DVD,ဟွန်ဒါမှာ Android 4.4 ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဟွန်ဒါအန်းဒရွိုက်ကား DVD
ဟွန်ဒါအန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဟွန်ဒါအန်းဒရွိုက်ကား DVD, ဟွန်ဒါမှာ Android 6.0 ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဟွန်ဒါမှာ Android 5.1 ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
HRV / VEZEL2013 အတွက် dsp ကားရေဒီယိုနှင့်အတူ Android9 အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
stereo စနစ်အပြည့်အဝထိတွေ့နိုင်သောလက်မောင်း drive Hilux 2016  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CITY 2015 အတွက်စတိုင်လ်သစ်မာလ်တီမီဒီယာဖွင့်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မာလ်တီမီဒီယာကားစတီရီယို CITY 2013 အတွက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
IX35 TUCSON 2015 အတွက် Android Car Audio  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CIVIC 2011 အတွက် Android9DSP ကားအသံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
KLYDE Honda CRV Android9Car DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဟွန်ဒါ Vezel HRV Android ကား DVD လမ်းညွှန်ပလေယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CITY 2018 အတွက် Klyde ထိတွေ့မျက်နှာပြင် DVD ရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
FIT JAZZ 2014 RHD အတွက် ၂ မီဒီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CRV 2017 အတွက် Android ရေဒီယိုခေါင်းစီးယူနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
android2din ရေဒီယို CIVIC 2016 အတွက်ရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Accord7အတွက်ကားအသံနှင့်အီလက်ထရောနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
FIT 2015 အတွက်နှစ်ဆ din ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CIVIC 2012 အတွက် dash navigation စနစ်အတွက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Civic 2016 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CRV 2017 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာသည့်စနစ်ဟာ android  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စီးတီး 2006-2013 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ညီ92017 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
9.0 ဟာ android 2014-2015 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ FIT  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CRV 2012-2015 ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
HRV / VEZEL2013 အတွက် dsp ကားရေဒီယိုနှင့်အတူ Android 9
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 268 / Piece/Pieces
Honda HRV / VEZEL 2013-2019 အတွက် Android9PX5 octa core head unit ၁) DSP တွင်တည်ဆောက်ထားသည့်အသံသည်ကောင်းမွန်သည် On-device EQs မှသည်အသံအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ တက်ကြွဆူညံသံဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် surround sound...
stereo စနစ်အပြည့်အဝထိတွေ့နိုင်သောလက်မောင်း drive Hilux 2016
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 262 / Piece/Pieces
Toyota Hilux 2016-2018 အတွက် Android9PX5 octa core head ဖြစ်သည် ၁) အရည်အသွေးမြင့်သောရေဒီယို IC: NXP TEF6686၊ Built-in TDA7851 အသံချဲ့စက် IC; မျက်နှာပြင် resolution: 1920 * 1080P, IPS မျက်နှာပြင်; ပံ့ပိုးမှုစင်တာ 4K (3840 × 2160 pixels) / 1080P HD...
CITY 2015 အတွက်စတိုင်လ်သစ်မာလ်တီမီဒီယာဖွင့်စက်
Honda CITY 2015-2019 အတွက် Android9PX5 octa core head ဖြစ်သည် ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android9PIE စနစ်၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် Rockchip ပရိုဆက်ဆာ 4GB RAM၊ Octa Core 32GB / 64G ROM၊ Cotex A72 (1.8Ghz) + A53 (1.4Ghz) ၂) အရည်အသွေးမြင့်သောရေဒီယို IC: NXP...
မာလ်တီမီဒီယာကားစတီရီယို CITY 2013 အတွက်
Land Cruiser 2012 အတွက်မော်တော်ယာဉ် DVD ကစားသမား နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 စနစ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော fluency၊ လိုက်ဖက်မှုနှင့် privacy တို့ပါဝင်သည်။ သင်သည်စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲအက်ပလီကေးရှင်းများကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သောစတင်မှုအမြန်နှုန်း၊...
IX35 TUCSON 2015 အတွက် Android Car Audio
IX35 TUCSON 2015 အတွက် Android Car Audio IX35 အတွက်ဒီယူနစ် Android Car Audio သည် Android Auto & Car Play ကိုထောက်ပံ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း Android Car DVD ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့် Klyde သည်ရုရှား၊ တူရကီ၊ GCC...
CIVIC 2011 အတွက် Android9DSP ကားအသံ
CIVIC 2006-2011 အတွက် Android9DSP ကားအသံ CIVIC အတွက် DSP Car Audio သည် OBD အမှားကုဒ်များ၊ ကားစွမ်းဆောင်ရည်၊ အာရုံခံအချက်အလက်များနှင့်ပိုမိုသောအရာများရရှိရန် Torque အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အတူသုံးထားသော Bluetooth OBD2...
KLYDE Honda CRV Android9Car DVD Klyde DAB + ရေဒီယိုအသံဖမ်းစက်နှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးဒီဂျစ်တယ်အသံထုတ်လွှင့်သည့်ရေဒီယိုလိုင်းများကိုစီဒီကဲ့သို့သောအသံအရည်အသွေးဖြင့်သင်ပိုမိုခံစားနိုင်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း Android Car DVD ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်...
ဟွန်ဒါ Vezel HRV Android ကား DVD လမ်းညွှန်ပလေယာ
ဟွန်ဒါ Vezel HRV Android ကား dvd navigation player 2015 Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM...
CITY 2018 အတွက် Klyde ထိတွေ့မျက်နှာပြင် DVD ရေဒီယို
CITY 2018 အတွက် Klyde ထိတွေ့မျက်နှာပြင် DVD ရေဒီယို ဒီ CAR DVD PLAYER သည် CITY 2015 နှင့် 2018 RHD အတွက်သင့်လျော်သည်။ ဖုန်းစာအုပ်ကိုသင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းမှ CITY အတွက် android wifi ကားစတီရီယိုသို့စည်းညှိနိုင်သည်၊ ထို့နောက်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊...
FIT JAZZ 2014 RHD အတွက် ၂ မီဒီမီဒီယာ
FIT JAZZ 2014 RHD အတွက် ၂ မီဒီမီဒီယာ Android ၉.၀ OS၊ ၉ လက်မ Capacitive HD 1024x600 Mutil-touch မျက်နှာပြင် Octa-core 1.5GHz CPU၊ Samsung DDR3 4GB RAM, ၃၂ ဂစ် internal internal memory၊ တိုးချဲ့ထားသောမီဒီယာကဒ် / GPS ကဒ် / USB အထိ 32GB၊ FIT JAZZ အတွက်...
CRV 2017 အတွက် Android ရေဒီယိုခေါင်းစီးယူနစ်
CRV 2017 အတွက် Android ရေဒီယိုခေါင်းစီးယူနစ် အသစ် HD 1024X600 capacitive touch screen - သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်တွေ့ရသည့်အတူတူပင် touch screen သည်ယခင်ကထက်တုန့်ပြန်သည်။ ဒီ CRV အတွက်ကား dvd navigation system...
android2din ရေဒီယို CIVIC 2016 အတွက်ရေဒီယို
android2din ရေဒီယို CIVIC 2016 အတွက်ရေဒီယို CIVIC 2016 အတွက်ဤကားခေါင်းစီးသည် OBD အမှားကုဒ်များ၊ ကားစွမ်းဆောင်ရည်၊ အာရုံခံအချက်အလက်များနှင့်ပိုမိုအချိန်နှင့်တပြေးညီရရှိရန်အတွက် Torque အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အတူအသုံးပြုထားသော Bluetooth OBD2...
Accord7အတွက်ကားအသံနှင့်အီလက်ထရောနစ်
Accord7အတွက်ကားအသံနှင့်အီလက်ထရောနစ် Accord7အတွက်ဤကားအသံနှင့်အီလက်ထရောနစ်သည် Bluetooth OBD2 ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းကို Torque အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့် OBD အမှားကုဒ်များ၊ ကားစွမ်းဆောင်ရည်၊ အာရုံခံအချက်အလက်များနှင့်အချိန်နှင့်အမျှပိုမိုရရှိရန်ကူညီသည်။...
FIT 2015 အတွက်နှစ်ဆ din ကားရေဒီယို
FIT 2015 အတွက်နှစ်ဆ din ကားရေဒီယို gps ပါသည့်နှစ်ဆ din ရေဒီယိုသည်သင်၏ကားကိုမည်သည့်ကားသစ်မဆိုခေတ်မီစေသည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 စနစ်ကိုအခြေခံထားသဖြင့်သင်သည်မြန်ဆန်သောတုန့်ပြန်မှုနှင့်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်မှုအတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်သည်။...
CIVIC 2012 အတွက် dash navigation စနစ်အတွက်
CIVIC 2012 အတွက် dash navigation စနစ်အတွက် CIVIC အတွက် Klyde ကားမာလ်တီမီဒီယာပလေယာသည်နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 စနစ်ကိုအခြေခံထားသဖြင့်သင်သည်လျင်မြန်သောတုန့်ပြန်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်စွာလည်ပတ်မှုအတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်သည်။...
Civic 2016 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player
Civic 2016 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player 1, 3D Navigation: အဆိုပါကားတစ်စီးစတီရီယိုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို real-time အညွှန်း function ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိတည်နေရာ, အမြန်နှုန်းမိုင်အကွာအဝေး, မြေမှတ်တိုင်အဆောက်အဦး Display, 3D...
CRV 2017 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာသည့်စနစ်ဟာ android
CRV 2017 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာသည့်စနစ်ဟာ android 1, 3D Navigation: အဆိုပါကားတစ်စီးစတီရီယိုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို real-time အညွှန်း function ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိတည်နေရာ, အမြန်နှုန်းမိုင်အကွာအဝေး, မြေမှတ်တိုင်အဆောက်အဦး Display,...
စီးတီး 2006-2013 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player
စီးတီး 2006-2013 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player 1. 2006-2013 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player အိမ်ရှင်ကွန်ပျူတာနှင့်အညွှန်း display ကို terminal ကိုပါဝင်ပါသည်ဒီစီးတီးအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ built-in GPS...
ညီ92017 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player
ညီ92017 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ 1.Compatible: လာမယ့်သီချင်းမှ skip volume ကို adjust သို့မဟုတ်အခြားရုပ်သံလိုင်းအကူးအပြောင်း, အပေါငျးတို့သစတီယာရင်ဘီးကိုချွတ်သင်၏လက်ကိုယူစရာမလိုဘဲ, သဘောတူညီချက်92017...
9.0 ဟာ android 2014-2015 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ FIT
9.0 ဟာ android 2014-2015 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ FIT 1. 9.0 ဟာ android FIT 2014-2015 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာများအတွက်ဒီမော်ဒယ်ယခုအလွန်တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံပါ။ သင်ကလိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI...
CRV 2012-2015 ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
CRV 2012-2015 ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင် 1. CRV 2012-2015 ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များအတွက်ဒီမော်ဒယ်ယခုအလွန်တည်ငြိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ OEM ဝန်ဆောင်မှုလက်ခံပါ။ သင်ကလိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI...
တရုတ်နိုင်ငံ ဟွန်ဒါအန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
1.Honda အန်းဒရွိုက်ကား DVD, အသစ်လွင်ဆုံးဟာ android 6.0 စနစ်က: android 6.0 ၏ optimized မှတ်ဉာဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုမှတဆင့်များနှင့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်စွမ်းရည်။ စွမ်းဆောင်ရည်၏ system ကိုမကြုံစဖူးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျမှုအဆင့်အထိယူဆောင်ခဲ့သည်။
2.Honda အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Bulit-in ကို WIFI ဟော့စပေါ့မျှဝေ: သင်တို့အဘို့လွယ်ကူပြီးချောမွေ့စွာအင်တာနက် access ကို browser ကိုအင်တာနက်, အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ watch, သင်၏မေးလ်စစ်ဆေးအတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်း maps.Built နှင့်အတူဂိမ်းကို download apps များ, ဒါမှမဟုတ်ပင်အညွှန်း play DVR function ကို (တိုက်ရိုက် USB ကကင်မရာကိုချိတ်ဆက်) / dual-လမ်းမှန် link ကို function ကို / Connect ကိုပြင်ပ OBD (optional ကို) / (optional) ပြင်ပ 3G modem ချိတ်ဆက်ပါ။
3.Honda အန်းဒရွိုက်ကား DVD, ကွဲပြားခြားနားသောဟွန်ဒါ car.as အတိုင်းလိုက်နာ fit နိုင်သည်
CRZ / HRV 2015 / VEZEL 2015 / CITY 2014 လက်ဝဲ / CITY 2014 ညာဘက် / 2014 FIT လက်ဝဲ / 2014 FIT ညာဘက် / Civic Saloon 2014 / Civic 2014 / Civic 2012 / Civic (ညာ) 2006-2011 / Civic (လက်ဝဲ) 2006-2011 / CRV 2012 / CRV 2006-2011 / နယူး FIT 2009-2011 / CITY 1.5L 2008-2012 / CITY 2008-2011
ဟွန်ဒါအန်းဒရွိုက်ကား DVD ဟွန်ဒါမှာ Android 6.0 ကား DVD ဟွန်ဒါမှာ Android 5.1 ကား DVD ဟွန်ဒါမှာ Android 4.4 ကား DVD ဆွစ် 2018 ဘို့အန်းဒရွိုက်ကား DVD